CDMA နည်းပညာမိတ်ဆက် (CDMA Technology Introduction) – Oakkar7's Blog
On January 31, 2010 By oakkar7In CDMA (စီဒီအမ်အေ)
မိုဘိုင်းဖုံးတွေကို မြန်မာပြည်မှာ မိတ်ဆက်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုစာတောင် ကျော်ခဲ့ပါပြီ၊ ဒီအထဲမှာ CDMA နည်းပညာဟာ တစ်ခု အပါအဝင်ပါ၊ ဟင်းဖုံးလို့ ဆိုရရင် GSM/CDMA တစ်ခုခု ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ CDMA ကို အစောဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်၊ CDMA နက်ဝပ်ဟာ တပြည်လုံးဖြန့်ကျက်လာပြီး CDMA450, CDMA800, W-CDMA စတဲ့နည်းပညာတွေ လဲ သုံးစွဲသူတွေအကြားမှာ ရေပန်းစားလာပါတယ်။
CDMA ရဲ့ အရှည်ကတော့ Code Division Multiplexing Access ပါ၊ Multiplexing လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ Communication media တစ်ခုထဲပေါ်မှာ Data Channel အများကို shareလုပ်ခြင်း၊ ပေါင်းထဲ့ခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ၊ Radio Communication မှာ ဆက်သွယ်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး frequency band တစ်ခုနဲ့ Technology တစ်ခုတော့ ရှိရပါတယ်၊ system တစ်ခုရဲ့ performance ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာ ဒီ band ကို multiple users တွေမျှဝေသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လောက် efficient ဖြစ်အောင်သုံးနိုင်လဲဆိုတဲ့ နည်းပညာပေါ် မူတည်ပါတယ်၊ ဒီလို Frequency band တစ်ခုထဲကို user အများကြီးသုံးစွဲနိုိင်အောင် လုပ်ပေးတာကို Multiplexing လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ မျှဝေသုံးစွဲနိုိင်အောင် လုပ်ပေးတာက Multiple Access လို့သုံးနှုံးပါတယ်၊ ဥပမာ 40MHz ရေဒီယို bandwidth မှာ သုံးစွဲသူ ၁၀၀ မျှဝေသုံးစွဲနိုင်တာထက် ၂၀၀ သုံးနိုင်တဲ့ နည်းပညာက ပိုပြီးအားသာပါတယ်၊ CDMA ကတော့ Code Division ဆိုတဲ့အတိုင်း သုံးစွဲသူအများစုဟာ တူညီတဲ့ frequency bandwidth တစ်ခုကို မတူညီတဲ့ coding တွေသုံးပြီး မျှဝေသုံးစွဲနိုင်ကြပါတယ်၊ သုံးစွဲသူဖုံးနဲ့ ရေဒီယိုစတေရှင် (Base Station) တို့ဆက်သွယ်ရာမှာ ဒီနည်းပညာကို သုံးတဲ့ဖုံးတွေကို CDMA ဖုံးလို့ လွယ်လွယ်ပဲ သုံးနှုံးခေါ်ဝေါကြပါတယ်။
CDMA နည်းပညာကို hand phone တွေမှာတင် သုံးစွဲတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ Satellite, GPS စတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစံနစ်တွေတင်မက စစ်သုံး ဆက်သွယ်ရေးစံနစ်တွေမှာပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
(CDMA နည်းပညာနဲ့ပါတ်သက်လို့ အကြမ်းဖျင်း ရေးဖို့စဉ်းစားပါတယ်၊ အခက်အခဲကတော့ ဒီနည်းပညာရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်း အသုံးချပုံ အားသာချက် စတာတွေကို လူတိုင်းနားလည်အောင် ရေးသားဖို့ တချို့အကြောင်းအရာတွေမှာ မလွယ်လှတာပါပဲ)
One thought on “CDMA နည်းပညာမိတ်ဆက် (CDMA Technology Introduction)”
thankalot. I want to know about Mobile Telephone Service.
April 21, 2013 at 8:43 pm	 Reply